Zanzibar oo madaxwayne dooratay iyo doorashada guud ee Tanzania - BBC Somali
Zanzibar oo madaxwayne dooratay iyo doorashada guud ee Tanzania
2 Nofembar 2010
Jasiiradaha Zanzibar oo ka tirsan dalka Tanzania ayaa yeeshey madaxweyne cusub, kadib doorashadii guud ee dhacdey maalintii Axadda.
Dr Ali Mohamed Shein oo ka tirsan xisbiga CCM ayaa noqonaya madaxweynaha cusub kadib markii u ka guuleystey musharixiintii kale ee la tartameysey.loo doortey madaxweynaha cusub ee Jasiiradaha Zanzibar oo qeyb ka ah Jamhuriyadda Tanzania.
Weli waxaa la dhowrayaa natiijada madaxtinimada dowladda dhexe oo natiijooyinka hordhaca ah ay muujinayaan inuu ku horeeye madaxweynaha talada haya Jakaya Kikwete.
Weriyaha BBC DAUD AWEIS ayaa warbixintan ka soo direy magaalada Daressalaam:
Guddoomiyaha Guddiga Doorashada ee Zanzibar Mr Khatib Mwinyichande ayaa ku dhawaaqey natiijada jagada madaxtinimada jasiiradaha Zanzibar oo uu ku guuleystey Dr Ali Mohamed Shein oo ka tirsan xisbiga talada haya ee CHAMA CHA MAPINDUZI (CCM).
Taariikhda Dr Ali Mohamed Shein
Dr Shein oo 62 jir ah ayaa heley codad gaaraya 179, 809 cod oo u dhigma 50.1 boqolkiiba, halka musharaxa ay sida aadka ah isugu dhowaayeen ee xisbiga CIVIC UNITED FRONT (CUF), uu heley 176, 338 cod oo u dhigma 49 boqolkiiba.
Ilaa iyo 365 kun oo qof ayaa codkooda ka dhiibtey doorashadan dhacdey maalintii axadda oo ahayd tii ugu xasliooneyd ee ka dhacda jasiiradaha tan iyo 1995kii, iyadoo inta badan ay rabshado dhiig ku data dhex mari jireen taageerayaasha xibiyada CCM iyo CUF.
Madaxweynaha cusub ee la soo doortey Dr Shein oo saxaafadda la hadley guusha uu heley ka dib waxaa uu u mahad celiyey shacabka iyo musharixiintii kale ee tartanka la gashey, isagoo sheegey inuu si daacad ah ugu shaqeyn doono dhamaan shacabka jasiiradaha.
Dr Shein, waxaa uu ku takhasusey culuunta dhakhtarnimada, waxaana uu dowladda dhexe ee Tanzania ka ahaa madaxweyne ku xigeen sagaalkii sanno ee la soo dhaafey.
Waxa uu xilka madaxtinimada Zanibar kala wareegaya madaxweynaha xiligiisii dhamaadey, Dr Aman Abedi Karume oo isna ka tirsan xisbiga CCM.
Si aan horey loo arkin ayaa musharaxa xisbiga CUF, Maalim Seif Sharif Hamad oo markii afraad madaxtinimada jasiiradaha isu soo sharaxey, waxaa uu oggolaadate natiijada, waxaana uu sheegey in doorashada dhacdey aanu jirin qof guuleystey iyo cid laga guuleystey toona, balse cidda guusha gaartey ay yihiin dhamaan shacabka reer Zanzibar.
Sida uu dhigayo heshiiskii dhowaan lagu ansixiyey aftida dadweyne ee Zanzibar ayaa dhigaya in labada xisbi ee ugu codad badan doorashada ay soo dhisaan dowlad ay awoodda ku qeybsadaan, taana ay ka dhigan tahay in Seif Sharif Hamad uu noqonayo madaxweyne ku xigeenka 1aad ee Zanzibar , xubnaha xisbigiisuna ay ka mid noqon doonaan golaha wasiirada.
Dhanka doorashada madaxtinimada dowladda dhexe ee Tanzania, Madaxweyne Dr Jakaya Mrisho Kikwete oo xisbiga CCM ka tirsan ayaa natiijooyinka hordhaca ah ku horeeya, waxaana ku soo xiga Prof Ibrahim Haruna Lipumba oo xisbiga CUF ka tirsan, kaalinta 3aadna waxaa ku jira, Dr Wilbroad Slaa oo xisbiga CHADEMA ka tirsan.
Dhanka kuraasta baarlamanka, walow xisbiga CCM uu ku horeeyo, hadana waxaa jab uu ka soo gaarey markii xubno muhiim ah oo golaha wasiirada ka tirsanaa ay kuraastoodii waayeen.
Lawrence Masha , wasiirkii Arrimaha Gudaha, Dr Batilda Buriyani, Wasiirka degaanka iyo Monica Mbega ayaa kuraastoodii waayey oo laga guuleystey.
Xubnaha caanka ah ee mucaaradka ee baarlamanka soo galey waxaa ka mid ah Vincent Nyerere oo uu adeer u yahay madaxweynihii hore ee dalka Julius Kambarage Nyerere, iyo Joseph Mbilinyi oo ah fanaan caan ka ah dalka, labadubana waxay ka tirsan yihiin xisbiga CHADEMA.